XAQIIQ: Gareth Bale Waa Madax Xanuunka Tababare Kasta Oo Real Madrid Soo Maray Iyo Garabka Uu Ka Helay Perez Oo Xaalada Markasta Xumeeya. - GOOL24.NET
XAQIIQ: Gareth Bale Waa Madax Xanuunka Tababare Kasta Oo Real Madrid Soo Maray Iyo Garabka Uu Ka Helay Perez Oo Xaalada Markasta Xumeeya.
Xidiga xulka qaranka Wales iyo kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa u muuqda in uu yahay xidiga dhibaatada ugu wayn ku ah tababare kasta oo uu Real Madrid kula soo shaqeeyay isaga oo madax xanuun ku soo riday dhamaan tababarayaashii Bernabeu kula soo shaqeeyay.
Gareth Bale ayaa sanadkii 2013 kii lacag rekoodh aduun ahayd oo 101 milyan euros ahayd waxa uu kaga soo wareegay kooxda Tottenham iyada oo Florentino Perez uu xidigan ka dhigtay mid uu si buuxda uga jeclaa dhamaan ciyaartoyda kale ee kooxdiisa.
Gareth Bale ayaa madax xanuun ku soo riday min Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Zinedine Zidane iyo hadda oo uu madax xanuunkii ugu horeeyay ku bilaabay Julen Lopetegui. Bale ayaa dhaawac uga baxay kulankii Madrid Derby wuxuuna seegay kulankii CSKA Moscow ee ay Real Madrid guuldarada la soo kulantay.
Laakiin waxaa layaab noqotay in baadhitaankii ay Real Madrid ku samaysay cabashadii Gareth Bale in ay ka soo baxday in aanu dhaawac qabin wuxuuna soo laabtay kulankii Alaves ee mar kale ay Madrid guuldarada la kulantay isaga oo bandhig aad u liitay sameeyay.
Laakiin iyada oo ay xaaladu halkaas marayso waxa uu Gareth Bale go’aan ku gaadhay in uu xulka qarankiisa Wales la midoobo taas oo keentay in muran badani ka dhashay qaabkii uu Bale ku soo qaatay mudadii ugu danbaysay ee xataa uu kulankii Alaves dhaawaca uga baxay.
Dhakhaatiirka kooxda Real Madrid ayaa sheegtay in Bale uu ka cabsi qabay in uu dhaawac soo gaadho taas oo muujinaysa sida xataa shaqaalaha caafimaadka Madrid ay xaalada Bale u dhibsadeen balse maamulka Madrid ayaa Wales ka dalbaday in aan halis la galin taas keentay Giggs uu qaatay taladaas kadib markii uu shaxdiisa ka reebay Bale kulanka Spain.
Carlo Ancelotti ayaa ugu horeeyay oo la soo dhibtooday xaalada Bale wuxuuna kadib sheegay in Perez ay iskugu dhaceen in Bale uu shaxdiisa ku soo daro markasta oo uu taam yahay xaalada uu doono ha ku jiree, laakiin Benitez oo ku xigay ayaan waqti badan hayn kooxda waxayna dhibta ugu badani ahayd in Bale uu dhaawac la dhibtoonayay.
Laakiin Zidane ayuu ahaa tababarihii waqtiga ugu adag baday Gareth Bale kaas oo xidiga ree Wales qabadsiiyay in kursiga kaydka ay dhaxdu ku disho kadib markii uu intii hore madax xanuun badan ka soo qaatay isla markaana uu u hogaansamayay go’aanka Perez ku doonayay in Bale uu shaxda mar kasta qayb ka ahaado.
Qaab ciyaareed liita, dhaawacyo iyo khilaafka uu madaxda Madrid iyo tababarayaashooda ka soo dhex abuurayay ayaa u muuqata in ay wali sii jiri doonto maadaama oo uu Perez wali aaminsan yahay in Bale uu buuxin karo booskii Ronaldo.
Khilaafkii Bale ka dhashay ayaa sabab wayn ka ahaa in Zidane uu shaqada Madrid iska casilay laakiin Lopetegui ayaa markiisa maraya imtixaanka iyo madax xanuunka uu Bale ku hayo macalimiintii uu Madrid kula soo shaqeeyay.